Tranom-biby, Tady mamatotra, Tranom-borona, Tady mainty misy vy - Shengsong
Ny tariby barbed dia azo ampiasaina betsaka ho fitaovana ho an'ny fefy tariby voatenona mba hamoronana rafitra fefy na rafitra fiarovana.
Ny tariby barbed dia karazana fitaovam-piarovana maoderina vita amin'ny tady vy maranitra sy tariby avo lenta.
Black annealed tariby dia antsoina koa hoe mainty vy tariby, malefaka annealed tariby sy annealed vy wire.It ahitana annealed tariby sy mainty menaka tariby.Annealed tariby dia azo amin'ny alalan'ny mafana annealing.
Ny fantsika coil dia vokatra revolisionera ao amin'ny indostrian'ny hazo. Ity karazana fantsika voatambatra ity dia ampiasaina amin'ny siding, sheathing, fencing, subfloor, tafo decking exterior deck sy trim ary asa hazo hafa.
Efa hatrany amin'ny "finoana tsara amin'izany, ny kalitaon'ny fahavelomana, ny laza voalohany, ny fandresena-fandresena mahasoa" ho an'ny fitsipika.
3. Ankehitriny SHENGSONG dia lasa orinasa maoderina misy injeniera zokiolona 10, mpiasa ara-teknika maherin'ny 300 ary fitaovana famokarana sy fanaraha-maso mihoatra ny 100.